13 Deeqo -waxbarasho ee Kulliyadda ee loogu talagalay Ardayda qaba Autism -ka 2022
Halkan, waxaad ka heli doontaa macluumaad casri ah oo ku saabsan deeqaha waxbarasho ee kuleejka loogu talagalay ardayda qaba cudurka autism iyo sida shaqsiyaad gaar ah ay u dalban karaan deeqaha waxbarasho.
Autism-ka, oo sidoo kale loo yaqaan Autism Spectrum Disorder (ASD) waa cilad horumarineed oo wiiqeysa awoodda shaqsi ee xiriir iyo wada-fal. Cilladaan waxay saameyn ku yeelaneysaa nidaamka neerfaha taasoo ka dhigeysa isdhexgalka bulshada mid adag, danaha xiisaha leh, iyo dhaqanka soo noqnoqda.
Sababta ugu weyn ee Autism-ka waxaa lala xiriirin karaa cillad xagga hidda-socodka ah waxaana lagu daaweeyaa iyada oo loo marayo daweyn. Waxay ka bilaabataa carruurnimada oo haddii goor hore la ogaado waxaa lagu daaweyn karaa iyada oo loo marayo daaweynta iyo habdhaqanka kale ee daaweynta. Ma jirto daawo dhab ah oo loo helo oo waligeed si buuxda ugama baxdo, daaweyntan ayaa kaliya gacan ka geysanaya sidii loo xakameyn lahaa xaaladda.
Dadka qaarkiis ee qaba cudurka autism-ka uma wada xiriiri karaan sida dadka kale ula hadlaan, si dhib yar ayey u hadlaan, indhaha ma qaban karaan, mana la dhexgeli karaan carruurta kale. Qaar ka mid ah dadka autism-ka ah ayaa si kastaba ha ahaatee u samayn kara qaar ka mid ah waxyaabahan ilaa xad.
Shakhsiyaadkaan gaarka ah waxaa tixgeliyay qaar qalbi qalbi fayow oo go'aansaday inay bilaabaan aasaaska iyo ururada samafalka si ay u siiyaan deeqo waxbarasho kulleej oo loogu talagalay ardayda qaba autism Xaqiiqdii waxaa jira deeqo waxbarasho guud oo loogu talagalay dadka naafada ah ee ardayda qaba autism ay codsan karaan laakiin kuwani waa kuwa gaarka ah ee shakhsiyaadka autistic-ga ah.
Deeqdan waxbarasho ee kuleejka ah ee loogu talagalay ardayda leh autism-ka waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta ikhtiyaarrada ardayda iyo dadka waaweyn ee laga helo cilladda iyaga oo ka taageeraya raacitaanka tacliinta sare.
Iyada oo aan la sii ambaqaadin, aynu ku quusno noocyadan gaarka ah ee deeqaha waxbarasho.
Deeqaha Kuleejka ee Ardayda leh Autism
Kuwa soo socdaa waa deeqaha waxbarasho ee si gaar ah loogu talagalay ardayda laga helay Autism Spectrum Disorder;
Autism Delaware Deeqaha
Avonte Oquendo Scholarship ee Autism
Ururka Cilmi baarista Autism (OAR)
KFM Isbadal Samaynta
Percy Martinez Deeqda Autism
Cilmi-baarista Autism Texas (ART)
Xafiiska Sharciga ee David P. Shapiro Autism Scholarship
Tartan Aqooneedka Autism ee Kelly Law Team
Xafiisyada Sharciga ee David A. Black Autism Scholarship
Abaalmarinta Deeqda-waxbarasho ee Autism ee Qareennada Phoenix
Ilkaha waxaa qoray John Barras, DDS Autism Scholarship
Varghese Summersett Autism Deeq waxbarasho
Autism Delaware waa hay'ad madax-bannaan oo aan faa'iido doon ahayn oo ku taal Delaware. Ururkan waxaa bilaabay waalidiin wadaagay khibrada guud ee autism si ardayda loo siiyo autism ilaha dhaqaale ee ay ugu baahnaan lahaayeen inay ku sii wataan xirfadooda xulashada machad sare.
Ururka Autism Delaware wuxuu siiyaa laba deeq waxbarasho oo kaladuwan ardayda ku jirta autismka, deeqaha waxbarasho waa;
The Daniel iyo Lois Gray Scholarship: Deeqdan waxbarasho waxaa la siiyaa arday qaba autism oo doonaya inuu ku sii wado shahaadada la xiriirta autism-ka ee Jaamacadda Delaware. Qiimaha deeqda waxbarasho waa $ 1,000
Dadka waaweyn ee leh deeqda waxbarasho ee 'Autism Scholarship': Tani waa deeqda waxbarasho ee labaad ee ay bixiso hay'adda Autism Delaware. Deeqdan waxbarasho waxaa loogu talagalay dadka waaweyn ee qaba Autism Spectrum Disorder oo ah kuwa deggan gobolka Delaware oo doonaya inay sii wataan kuleejo ama waxbarasho dugsi sare kadib.
Codso deeqdan waxbarasho halkan.
The Avonte Oquendo Memorial Scholarship waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee kuleejka ah ee loogu talagalay ardayda qaba cudurka autism oo ay sannad kasta bixiso The Perecman Firm, PLLC ardayda laga helo autism ama qof qaraabo dhow ah oo qaba cilladda. Qiimaha deeqda waxbarasho waa $ 5,000 waxaana jira shuruudo gaar ah oo loo dhigay helitaanka deeqdan waxbarasho.
Codsaduhu waa inuu ka diiwaangashan yahay kulliyad ama jaamacad la aqoonsan yahay ama ku saabsan oo uu qorayo qormo ugu yaraan 500 oo erey iyo ugu badnaan 1000 eray, iyo qoraal rasmi ah ama qoraal rasmi ah oo aan rasmi ahayn.
Ururka Cilmi baarista Autism (OAR) waa aasaas sadaqo ah oo ay aasaaseen qoyska Schwallie wuxuuna u heellan yahay wanaajinta nolosha shakhsiyaadka qaba Autism Spectrum Disorder. Iyada oo loo marayo tabarucaad ka timaadda qoyska iyo xubnaha kale ee guddiga, ururku wuxuu u fidin karaa deeqo waxbarasho kuleejka ardayda leh autism-ka.
OAR waxay siisaa laba ikhtiyaar deeq waxbarasho oo kala duwan ardayda leh autism-ka ay ka kala xushaan, iyagu waa deeqda waxbarasho ee Schwallie iyo Lisa Higgins Hussman Scholarship.
Schwallie Deeqda Qoyska: Qoyska Schwallie waxay door weyn ka ciyaaraan dejinta OAR iyada oo loo marayo ururkan waxay bixisaa deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda qaba cudurka autism. Deeqdani waxay taageertaa ardayda dhigata laba ama afar sano hay'ad sare si ay u sii wataan barnaamij kasta oo shahaado ah oo ay doortaan.
Lisa Higgins Hussman Scholarship: OAR waxay siisaa deeqo waxbarasho kulleejyada ardayda leh autism ama kuwa la kulma caqabado maalinle ah oo la xiriira autism. Waxay taageertaa ardayda ka diiwaangashan jaamacad laba sano ah, xirfadaha nolosha ama barnaamijyada dugsiga sare, ama xirfadaha, farsamada, ama iskuulada ganacsiga.
Si aad xaq ugu yeelatid mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee kulliyadda ee loogu talagalay ardayda qaba cudurka autism ee ay bixiso OAR, waa inaad noqotaa shaqsi laga helay cudurka autism, waa inuu muujiyaa caddeynta cudurka, sidoo kale waxaad tagi doontaa xarun sare oo laga aqoonsan yahay Mareykanka.
Qiimaha deeqda waxbarasho waa $ 3000, halkan ka dalbo
Sida magaca uun tilmaamaya, KFM Making A Difference waa urur aan macaash doon ahayn oo ujeeddadiisu tahay oo keliya in wax laga beddelo waxtarka ama waxtarka nolosha dadka la nool cudurka autism. Iyada oo qayb ka ah sameynta isbeddelka, ururku wuxuu siiyaa deeqo waxbarasho kuleejka ardayda leh autism-ka.
Ayaa dalban kara deeqdan waxbarasho?
Ardayda dugsiga sare ee qaba otisam-ka ee raba inay dhigtaan xarun dugsi sare kadib ah
Ardayda leh autismka waxay iska qoreen barnaamijka kuleejka
U fur codsi dhammaan ardayda soo socota iyo kuwa hadda dhigta ee leh autism-ka Mareykanka iyo caalamkaba.
Deeqdani waxay u dhigantaa $ 500 oo loo isticmaali doono in lagu bixiyo waxbarashada sare ee ardayda.
Deeqda waxbarasho ee KFM sidoo kale waxay u baahan tahay dukumiintiyo qaarkood si loo dalbado;
Warqad dabool ah oo ay kujiraan noolo aan ka badnayn ereyada 250, barnaamijka hay'adda sare ee laga aqbalo ama hadda dhigta sida kuleejka, kulliyadda bulshada, barnaamij xirfadeed, iwm. , iyo emayl.
Qormada oo ay weheliyaan saddex sawir oo aad jeclaan lahayd inaad ku darto qormadaada
Percy Martinez waa garyaqaan caan ka ah gobolka Florida, USA, waxayna siisaa deeqo jaamacadeed ardayda qaba cudurka autism. Isaga, Percy, wuxuu bixiyaa deeqdan waxbarasho si loogu caawiyo ardayda dhimirka iyo dhimista kharashka waxbarashadooda, iyo sidoo kale inuu koriyo jiilka xiga ee ardayda la nool Autism Spectrum Disorder.
Qadarka deeqda waxbarasho waa $ 5,000, halkan ka eeg waqtiga kama dambaysta ah.
Si aad ugu qalanto deeqda waxbarasho ee 'Percy Martinez Scholarship' waxaad u baahan tahay inaad buuxiso shuruudaha soo socda;
Waa inaad ku dhacdaa mid ka mid ah qaybaha; dugsiga sare, shahaadada koowaad, qalin-jabinta, ama dugsiga autism
Buuxi mid kasta oo ka mid ah qaybaha
Kaqeybgal barnaamij ama tabaruce ahaan ama layli ahaan
La muujiyey xiisaha waxbarasho
Dhawaan lagu qoray iskuul la aqoonsan yahay
Fiidiyow 3-4 daqiiqo ah ama qoraal 100-600 erey ah oo ku saabsan mowduuca "Waa maxay fikradahaaga mustaqbalka waxbarashada?"
Cilmi-baarista Autism waa hay'ad fadhigeedu yahay Texas si ay uga caawiso shakhsiyaadka qaba cudurka autism qaab kasta oo ay awoodaan. Waxay wadaan mashaariic cilmi baaris ah waxayna siinayaan deeqo waxbarasho kulleej ardayda loogu talagalay autismka si looga caawiyo waxbarashadooda sare ama loogu tababaro shaqooyin.
Qiimaha deeqda waxbarasho waa $ 500 waana la bixiyaa sanadkiiba, markaa haddii aad seegto sannadkan marwalba waad hubin kartaa sanadka soo socda. Waxaad ubaahantahay inaad buuxiso shuruudaha uqalmitaanka soo socda;
Degane reer Texan ah oo laga helay Autism Spectrum Disorder oo dhammeeyay dugsiga sare ama kasbaday GED. Waxaa loo aqbalay machad sare sida kuleej, iskuul xirfadeed, tababar xirfadeed, jaamacad, ama kuliyada bulshada.
Warqad fure ah oo oraneysa sababta aad u raadineyso waxbarashada dugsiga sare kadib iyo qorshooyinkaaga shaqo
Caddayn inaad qabto Autism Spectrum Disorder
Halkan ka eeg waqtiga kama dambaysta ah
Xafiiska Sharciga ee David P. Shapiro wuxuu afartii sano ee la soo dhaafay siiyaa deeqo waxbarasho kulliyadeed ardayda qaba cudurka autism ee doonaya inay waxbarashadooda ku sii wataan hay'ad sare. Deeqda ayaa loo isticmaali doonaa in lagu bixiyo qayb ka mid ah kharashka waxbarashada ee loogu talagalay qofka qaata kulliyad ama machad xirfadeed.
Si aad u dalbato deeqda waxbarasho, waa inaad keentaa caddeynta cudurka ASD ee lagaa helay oo aad ku talo jirto inaad sii wadato waxbarashadaada.
Kooxda Kelly Law Team waxay siinayaan $ 1,000 deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda qaba cudurka autism si ay uga dhigaan waxbarashadooda ama khidmadaha kale ee ay ku raadinayaan tacliinta sare. Deeqdan waxbarasho ayaa loo aasaasay inay ku dhiirrigeliso ardaydan gaarka ah inay ku sii wadaan barnaamij kuuliyada ama tababarka xirfadaha.
Codsadeyaashu waa inay ka yimaadaan Mareykanka oo ay soo bandhigaan qormo ilaa 100 erey ah oo sharraxaya sida ku sii socoshada waxbarashadaadu ay u horumarinayso yoolalkaaga mihnadeed iyo qormo ikhtiyaari ah oo illaa 1,000 ereyo ka kooban oo ka sheekeynaysa sida Autism Spectrum Disorder ay saameyn ugu yeelatay yoolalkaaga waxbarasho taariikhda.
Xafiisyada Sharciga ee David A. Black waxay mar labaad siinayaan $ 1,000 deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda qaba cudurka autism ee doonaya inay horumariyaan waxbarashadooda kulliyad kasta oo la aqoonsan yahay ama tababar xirfadeed. Deeqdani waxay taageeri doontaa ardaydan gaarka ah si ay u sii wadaan himiladooda waxbarasho.
Codsadeyaashu waa inay noqdaan muwaadiniin Mareykan ah. Codso deeqdan waxbarasho halkan.
Kani waa shirkad sharci oo ku raaxeysata ka caawinta ardayda autism-ka, iyadoo la siinayo deeqo waxbarasho oo ay u isticmaali karaan wax ka bedelka ama dhimista kulliyadooda, jaamacaddooda, ama khidmadda tababarka xirfadda. Qadarka deeqda waxbarasho waa $ 1,000 wuxuuna u furan yahay muwaadiniinta Mareykanka ee doonaya inay sii wataan waxbarashadooda hay'ad sare.
Deeqdan waxaa la siiyaa ardayda laga helay Autism Spectrum Disorder kaas oo lagu dabaqi doono waxbarashadooda kuleejka ama jaamacadda. Deeqdan waxaa aasaasay Dr. John Barras si uu ugu dhiirrigeliyo ardayda qaba autism-ka inay ku sii wataan xirfadda ay doorteen machad sare oo la aqoonsan yahay.
Shuruudaha dalabka waxaa ka mid ah qormo ka badan ereyada 150 iyo qormo ikhtiyaari ah oo ka kooban ereyada 800 oo sharraxaya sida ASD ay saameyn ugu yeelatay khibradaada fulinta ujeeddooyinkaaga waxbarasho.
Incight waxay bixisaa deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda qaba cudurka autism iyo sidoo kale shaqsiyaadka naafada ah. Waa deeq waxbarasho guud oo loogu talagalay dadka naafada ah ee doonaya inay ku sii wataan tacliinta sare kulleejo la aqoonsan yahay, jaamacad, ama xarun xirfadeed.
Si aad xaq ugu yeelatid deeqda waxbarasho ee 'Incight', codsadayaasha waa in lagu ogaadaa in ay qabaan autism ama naafonimo kale ayna muujiyaan caddeyn, in ay degan yihiin Washington, Oregon, ama California. Ardaydu waa inay sidoo kale muujiyaan waxqabadka tacliimeed ee wanaagsan iyo u adeegida bulshadooda si ay ugu guuleystaan ​​abaalmarintan.
Varghese Summersett waxay caawineysaa shakhsiyaadka ku nool hal naafo ama mid kale sida Down syndrome iyo autism. Abaalmarinta waxay siisaa deeqaha waxbarasho ee kuleejka ardayda leh autism-ka si ay uga caawiso dib-u-dhigista khidmadda waxbarashadooda ee kuleejka, jaamacadda, ama tababarka xirfadaha.
Si aad xaq ugu yeelatid deeqda waxbarasho, codsadayaashu waa inay da'doodu tahay 15 sano ama ka yar oo ay muujiyaan caddeynta cudurka autism iyadoo loo marayo ogaanshaha cudurka. Abaalmarinta ayaa u dhiganta $ 500, halkan ka eeg waqtiga kama dambaysta ah iyo isku xidhka arjiga.
Kuwani waa deeqaha waxbarasho ee hadda la heli karo ee loogu talagalay ardayda qaba cudurka autism, xiriiriyeyaasha dalabka waxaa lagu bixiyaa mid kasta oo ka mid ah faahfaahinta. Si taxaddar leh u aqri shuruudaha u-qalmitaanka iyo nidaamka dalabka si aanad u dhicin wax khalad ah oo aad uga fogaato khaladaadka.
Waad dalban kartaa in ka badan hal ka mid ah deeqdan waxbarasho laakiin haddii aad heshay nooc gaar ah ka hor ma awoodi doontid inaad codsatid midkaas gaarka ah mar dambe maadaama aadan u qalmin inaad sidaas sameyso. Laakiin waad dalban kartaa kuwa kale ee aadan waligaa ka faa iidaysan.
Xitaa haddii aadan qabin Autism Spectrum Disorder, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tusto qoraalkan qof ehelkaaga ah ama qof kasta oo aad taqaanno oo qaba cudurka. Haddii qoraalkani aanu adiga ahayn, hubi talooyinka hoose si aad wax badan u aragto.
Shahaadooyinka Dawladda ee Khadka Tooska ah
Liiska Polytechnics-ka Federaalka ee Nigeria
Barashada Hagaha Dibadda Talooyinka deeqaha waxbarasho Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Deeqaha waxbarasho ee Mareykanka
deeqaha waxbarasho ee kuleejka ardayda leh autism
Post Next:Shahaadada Bachelor-ka Khadka Tooska ah ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah iyo Kuwa Gudaha
Pingback: 10 Barnaamijyada Autism ee ugu Fiican Dugsiyada Dadweynaha 2021
Pingback: 13 Dugsiyada Baahiyaha Gaarka ah ee ugu Fiican Florida 2021
Pingback: 35+ Dugsiyada Ugu Fiican ee Ku Shaqeeya Sare Autism -ka 2021
Riley Rhodes wuxuu leeyahay,
In kasta oo aan jeclahay in dhiirrigelinta deeqaha waxbarasho ee dadka qaba ASD lagu wadaago boggan, habka looga hadlayo cilladda bilowga ayaa ah aragti aad u duugowday oo fikrad khaldan leh.
“Dadka qaba autism-ka uma wada xiriiri karaan sida dadka kale ay u hadlaan, si dhib yar ayey u hadlaan, indhaha ma qaban karaan, mana la dhexgeli karaan carruurta kale. Caadi ahaan iyagu iyagu iskumana jiraan wax xiriir ah oo ay la leeyihiin dunida dibedda. ”
Tani waa hab aad u xun oo aan sax ahayn oo lagula xiriiro sida dadka autismku u shaqeeyaan. In kasta oo ay jiraan dad qaba ASD oo aan hadal ahayn, qiyaastii 60% ayaan ahayn. Waxay awood buuxda u lahaan karaan inay kula xiriiraan si wax ku ool ah oo "caadi ah". Qaar iyaga ka mid ah WAY qaban karaan xiriirka indhaha, waxay u wada xiriiraan sida dadka kale yeelaan, oo waxay ku dhex milmaan carruurta kale. Maaha hal cabir oo ku habboon cilladaha oo dhan.
Waxaan u soo jeedinayaa qof kasta oo qortay tan inuu ku barayo naafanimada Autism Spectrum Disorder ka hor inta uusan u dhigin noocan ah fikradaha khaldan, karti, dhacsan, iyo hadal aan sax ahayn adduunka.
Si fiican u samee.
April 28, 2021 at 9: 42 pm
Waanu qadarinaynaa tabarucaadkan. Isbedelada ayaa la sameeyay.